Linux ကတည်းကအမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်သည် Linux မှ
DesdeLinux ကိုမမျှော်လင့်ဘဲစောင်ရေထဲမှဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်ဟုကြေငြာရသည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤအတိုင်းအတာယူရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် hosting နှင့် domain ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဘတ်ဂျက်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ISP သည်ဆက်သွယ်မှုကိုအမြဲတမ်းရုပ်သိမ်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။
အဲဒါကိုထိပ်ဆုံးမှာကျွန်တော်အသိပေးခံရတယ် GoDaddy သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို SOPA ဟင်းချိုပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့သဲလွန်စတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတချို့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်ုပ်တို့မဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်၊ ငါတို့အတွက်အနည်းဆုံးတော့ငါကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပစ်မယ်လို့သူတို့ကငါတို့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။
အရမ်းကောင်းတယ် အကယ်၍ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် FromLinux ကိုသူတို့မရရှိနိုင်ပါကအကြောင်းရင်းများကိုသိရှိပြီးဖြစ်သည်။
» ၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များစွာအသတ်ခံခဲ့ရသည့်ဤကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသောနေ့သည်ကမ္ဘာ့အနောက်ဘက်ရှိဟာသတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်လိုက်ခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာပင်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ .. April April Fool's Day ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Linux ကစပြီးအမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်
47 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
xD, goDaddy အရာကဖတ်နေရုံတင်ပဲဒီ post ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ သို့မဟုတ် "ကျွန်ုပ်တို့၏ site သည် A2Hosting တွင်ရှိသည်" ဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်
ကောင်းပြီ၊ ဒါမဟုတ်ဘူး။ Hosting သည် 2hosting ဖြစ်သော်လည်းဒိုမိန်းကို GoDaddy တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်
သူတို့က "bicotear" မသွားဘူးလား
စိတ်မကောင်းစရာ၊ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုလပေါင်းများစွာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါဟာစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ် ဦး ပါ။ မင်းအများကြီးပျောက်နေလိမ့်မယ် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ ISP မှဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ်ပါ
ပျောက်နေသောအက်စ်မရှိပါ။ ငါတို့အားလုံးကိုသင်ရှင်းပြရမလား။ ¬¬
ကျွန်ုပ်တို့၏ ISP nos connection ကိုအစဉ်အမြဲဖယ်ရှားလိမ့်မည်
ဟာသပဲပြောတာသင် HOYGAN ကိုသုံးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး
«ကျွန်ုပ်တို့၏ ISP NO connection ကိုထာဝရဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည် .. »
ထိုဆုတောင်းခြင်းကိုနားလည်ရန်အလွန်ခက်ခဲပါသလား။ ဒါကဟာသပါပဲ။ အယူအဆကတော့တကယ်တော့ဒါနဲ့မတူဘူးဆိုရင်ငါတို့ကိုပြတ်တောက်သွားအောင်လုပ်ပုံရတယ်။
ဒါကြောင့်ပိုရှည်အပိုင်းအစဖြစ်ခဲ့ ... ဖြစ်ပါတယ်
@Courage - မင်းကသူ့ကိုနားမလည်ဘူး။ သူကရေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူပေးခဲ့သောထိုရှင်းပြချက်သည်ယင်းကိုဝန်မခံရန်အကြောင်းပြချက်မျှသာဖြစ်သည်။ xD
အခြေခံအားဖြင့်တော့မင်းက fuck ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ ဟားဟား…
အာ ဒီကနေ့မှာပဲ Linux ကိုအမြဲတမ်းသုံးဖို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ့ Windows icon ကိုမင်းမမြင်ဘူးလား။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Linux ကို (ငါးနှစ်ကြာအသုံးချပြီး) နှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသော MacOSX မှအမြဲတမ်းစွန့်ခွာသွားမည်ဖြစ်သည်။
Tina Toledo အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ .. မင်းလည်းမကောင်းဘူး .. ငါငြီးငွေ့နေတဲ့ Debian နဲ့ Arch ကြားက Windows အဟောင်းကိုလည်းသွားလည်မယ်ထင်တယ်
သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ ငါမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့စီအီးအိုအသစ်ဖြစ်မယ် bye linux
အရမ်းပျော်လိုက်တာ။ ပင်ဂွင်းကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ်။ Ha Ha Ha
@ pandev92 @ ကျွန်ုပ်တို့၏အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Bill Gates အတွက်သတင်းစကား။
ကျွန်ုပ်၏ "Windows Low Vista" laptop တွင် OEM လိုင်စင်တံဆိပ်ကျန်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုဖြိုခွဲရတာဟာပျော်စရာပဲ။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ Microsoft Office အသစ် မှလွဲ၍ မည်သည့် Office suite မှမဖတ်နိူင်နိုင်အောင်သီးသန့်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သော .abxdoc အသစ်ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
[…] ကျွန်ုပ်၏“ Windows Low Vista” လက်ပ်တော့ပ်တွင်နောက်ဆုံးကျန်ရှိသည်မှာ OEM လိုင်စင်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုဖြိုခွင်းရတာအရမ်းပျော်တယ်။
XD XD XD ငါ XD ရယ်မောတယ်
တကယ့်ကိုအပြစ်မဲ့တယ်ဆိုရင်ငါခဏတာသံသယဝင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ကိုငါမြင်တယ် Elav ယုံမှားစရာမရှိ ...
ဒီဟာအပြစ်မဲ့တယ် !!! ဟဲဟဲ
Phew !!! သငျသညျအကြှနျုပျကိုနို့စို့ကိုပေးခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ကြောက်လန့်! xDDD
ကြိုးစားပါ !! ဒါပေမယ့် strain ပါဘူး !!!! ဟက်တာဟက်တာဟက်တာဟက်တာဟက်တာဟက်တာ
ကောင်းပြီ၊ ကိုက်လိုက်တာနဲ့ငါနှလုံးသားတစ်ခုခုန်နေတယ်။ ငါအသစ်စက်စက် install လုပ်ထားတဲ့ arch + kde နဲ့ဘယ်ကိုသွားမလဲ။
ufff ... ဒါ့အပြင် XD လဲ
ဒီနေ့ဘာလဲ xD ဆိုတာငါသိလို့အစကတည်းကမကိုက်ဘူး
ဒီနေ့ငါကအခြားပြက်လုံးများကိုနှစ်ခါကျသွားပြီ၊ ဒီတစ်ခုမှာ xd မကျဘူး ..
မင်းကိုငါစာရေးဖို့သွားမယ်၊ မင်းငါ့အတွက်တော့မကြိုးစားနိုင်ဘူး၊ မင်းကအချဉ်ပြန်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့်သင်ထွက်သွားပြီးကတည်းကမှောင်မိုက်တဲ့ဘက်ကိုပြန်လာဖို့သင့်ကိုငါတိုက်တွန်းချင်တယ်၊ ။
ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာတွင် Linux အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေရန်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ခွင့်ပြုပါရန်သင့်အားတောင်းဆိုချင်ပါသည်
Perooo ကောင်းသော (T. T)
BahD, အကယ်၍ GoDaddy ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ip (?) သို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်Aprilပြီလ Fools Day D: (ဒီနေ့ <သတင်း <3 <လိုမျိုးပြတ်တောက်သွားတယ်)
reindeer ပါ ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကိုဘယ်တော့မှပြန်မဖတ်တော့ဘူး၊ ယခုငါ macboy hahahahaha ဖြစ်သည်
trolling သည် xD ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်သော Hahaha နှင့်ငါ
အိုးငါလာတာမြင်ပြီ။ ကောင်းပြီ၊ ရှက်သည်။ ငါ MuyWindows သို့ပြန်သွားသည်။ ဤ Linux သည်ကျွန်ုပ်၏အရာမဟုတ်။
လူအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါ၊ အောက်ပါအတိုင်းသင့်ကိုကံကောင်းပါစေ။ 😀
ဒါဟာမှန်တယ်၊ လိမ်တယ် ... ငါ့ကိုမကြောက်ကြဘူး ...
ဟားဟား! သင်ရုံမဆိုင်းမတွအတူကျောက်သည်မည်မျှပျော်ရွှင်ကြည့်ရှုရန်သာ ...
ဟားဟားဟားဟား၊ အရာအားလုံးကလေးနက်တဲ့သတင်းဖြစ်မနေဘူးလား။ ... မင်းကိုဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့အသက်ကိုပေးရမယ်
နောက်ကျပါစေ S သည် TT ဖိုရမ်တွင်အလွန်အလုပ်များခဲ့သည်
ဟုတ်ကဲ့၊ ဟားဟား၊ ငါမြင်တယ်၊ မင်းရဲ့အချိန်ဇယားကို check စစ်ဆေးပါ
ဒီစာမျက်နှာကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါခဏတာအမှား ၅၀၀ ဖြစ်သွားတယ်။ ငါယုံတယ်။
ကံကောင်းတာကငါအဲဒီမှာဖြစ်ပျက်သောအခါငါမဟုတ်ခဲ့ ... ဒါပေမယ့်ငါပြင်းထန်သောဟားဟား၌ရှိ၏
ဒီအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုစွန့်ပြီး“ လာမယ့်၊ နောက်နှင့်နောက်သို့” ကိုချက်ချင်းသွားပါတော့မယ်။ ။ ။ ။ ဟဲဟဲ
အောက်စီဂျင်စာလုံး: အဆိုပါ KDE ဖောင့်